Previous Article FRSC Agbapeela Atụmatụ Ijè Awele Nke Ọnwa Mbà
Next Article Nnewi South Na FRSC Ejikọọ Aka Ibèlàtà Ihe Mbere Okporo Ụzọ
Dịka ọ na-anata ya bụ nturuugo, Eghegha ka ozi kwuru na ọ sịrị na ọ bụ nnukwu ihe ọñụ ịmata na Ikuku Udo bụ ndị e tụnyere ugo dịka ụlọọrụ ọkaibe nke afọ a. "Obi jupụtara m n'ọñụ, na ndị ọrụ niile nke Ikuku Udo, ịmata na Ikuku Udo, Ụgbọelu njem kachasị na Ọdịda Anyanwụ Africa, bụ nke etunyere ugo ụbọchị taa dịka ụgbọelu njem nke tụnyere nnukwu ụtụ n'otito Ụlọọrụ Njem Elu Naijiria."
Eghegha tinyere na ụgbọelu njem ahụ ga-aga n'ihu n'ịchake site n'ịhụ na ha nyere ndị njem ha ezi nchekwa na njem elu kachasị. Ọ gara n'ihu were kwuo n'afọ ise nke ụgbọelu njem nwere ọtụtụ ihe aka mgba maka kwuo na site na njikọ aka ọnụ na ịhụ ụzọ nke ndị isi mere ụgbọelu ahụ jiri enweta ọtụtụ mmeri.
Nturuugo a, bụ nke Ụlọọrụ Mgbasa Ozi Akwụkwọ dị na Lagos chịkọbara, bụ nke onyeisi oche mmemme ahụ, bụ Ọkammụta Anya O. Anya tunyere, site na enyemaka Chief Marc Wabara na Oriaku Priscilla Oti.